Omenala Towel Wall-Mounted O O Ring - Viga Faucet Emeputa
Home Ngwa kacha ere igwe mma Omenala Towel Wall-Mounted O O
Ihe Nke 480808BN
N’ezie, ọ dịghị ihe dị njọ na ndị ochie, a pụkwara ikwu nke a gafee ọtụtụ niches na ụdịdị, ọkachasị ime ụlọ ịwụ. N'ịbụ ndị ejirila ma nwee obi ụtọ ruo ọtụtụ iri afọ, mgbanaka a na-akpọnwụ akpọnwụ zuru oke O imewe ga-abụ nnukwu mgbakwunye na ụlọ ịsa ahụ ọ bụla, ọkachasị ndị dị ala iji chekwaa ma ọ bụ kpọgidere akwa nhicha. Site na nchara nchara, nke a ga-abụ ihe na-efu, ngwọta dị elu iji nwee akwa nhicha ahụ ebe ọ bụla ọ chọrọ na ụlọ ịsa ahụ ọgbara ọhụrụ na ọkaibe.
Otu n'ime nkọwa kachasị mma banyere njide akwa nhicha akwa a bụ na ọ nwere atụmatụ ịdabere na ya, 3m adhesion zuru ezu ka ọ wee nwee ike ịrapara ya na ebe ọ na-enweghị mmebi ma ọ bụ nrụnye dị mkpa. Ebe ọ bụ na e mere ya maka ime ụlọ ịwụ ahụ, ọ ga-adị ike megide mmiri ma nrapado ga-ejidekwa uru ọ bara, na-eme ka nke a bụrụ oku ziri ezi maka ndị chọrọ ibute ụzọ dị mma ma dị elu. Site na akwa nhicha ahụ na akwa nhicha ahụ, akwa mgbanaka a na-agbanye mgbanaka O mgbanaka ejiri akwa nhicha ahụ ga-abụ onye na-ere ọkụ ọkụ maka onye nkesa ọ bụla na-achọ ngwaahịa dị mkpa.
Oge gboo towel na-akụ aka
Egosiputa ihe n’ile anya n’ariri ndi oru oku
Nchara dị mma na-eme ka ndị na-ahọrọ ịchọrọ mma nke oge a nwee mmetụta dị mma
Mbụ: Sleek na ọkaibe Matte Black Tissue Holder na shelf
Next: Nnukwu ime ụlọ ịwụ ahụ na-ete akwa